I-Ripples n Tide Waterfront Studio - I-Airbnb
I-Ripples n Tide Waterfront Studio
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRaewyn
Amatye avela elunxwemeni lwamanzi kodwa akufuphi kuzo zonke izinto eziyimfuneko. Ukupaka okwaneleyo. Ukufikelela lula kunye kufuphi nedolophu. Ukhetho oluhle lobomi beentaka onokubukela.
Istudiyo sokuphumla, sale mihla nesexesheni sinika iindwendwe ukuphumla kwindawo ekuxakekileyo kuyo edolophini. Kwimizuzu eyi-5 kuphela ukusuka kwiziko lokuthenga lase-Onerahi, imizuzu eyi-15 ukusuka e-Wangarei Town Basin. Imizuzu eyi-8 ukusuka e-Parua Bay Tavern kunye nevenkile yokutyela kunye nemizuzu eyi-7 ukuya kwi-Parua Bay Boat ramp. Kukho ibala legalufu elikufutshane e, iindwendwe zinezinto ezahlukahlukeneyo ezikufutshane. Kwabo bafuna ubunzima bokuhamba kwi-Mt Mania track kunye nokuhamba kwamahlathi amaninzi kufutshane. Unxweme olunentlabathi emhlophe oluyimizuzu eyi-35 xa uqhuba. Bukela ilanga litshona ebusuku nasekuphumeni kwelanga ekuseni.
Sithanda ukuba iindwendwe zethu ziphathe istudiyo sethu ngentlonipho.
Kufuneka ubungqina bokuba kundawoni ukuhlengahlengiswa kunye nobungqina bovavanyo olugwenxa lwe-Covid 19.
Ukutshaya kuvumeleke ngaphandle kuphela.
Indlu ayibalungelanga abantwana abancinci njengoko iselunxwemeni lwamanzi.
Abanikazi abanobuhlobo namafanasini.
Ebekwe ngqo kwiWangarei Harbour unobomi obumnandi beentaka onokubukela. Kufuphi neziko leevenkile ze-Onerahi nemizuzu eyi-15 kuphela ukuya kwisixeko saseWangarei. Kufuphi neevenkile zokutyela kunye nebala legalufu lePines. Yimizuzu eyi-10 kuphela yokuhamba ngemoto ukusuka eParua Bay Tavern ( ivula ngoLwesithathu ukuya ngeCawa). Eyona nto kufuneka uyityelele. Ukuhamba ngeenyawo kunye neendlela zamahashe kwindawo yeWangarei Heads.
Umbuki zindwendwe ngu- Raewyn
Nceda uqaphele ukuba ngenxa yokunyuka kwenani leembalelwano zeCovid 19 eNew Zealand ngoku sifuna ubungqina bokutshintshwa kabini.
Ifumaneka ngexesha lokuhlala kweendwendwe. Sithanda ukudibana neendwendwe zethu ngexesha lokuhlala kwazo, kodwa xa sidibene, sisoloko siziyeka ukuze zonwabele ukuhlala kwazo. Inombolo yefowuni iyafumaneka.
Ifumaneka ngexesha lokuhlala kweendwen…